Voalohany indrindra, ny zezika akoho manta dia tsy mitovy amin'ny zezika organika. Ny zezika biolojika dia manondro ny mololo, mofomamy, zezika amin'ny biby fiompy, ny sisa tavela amin'ny holatra ary ny akora hafa amin'ny alàlan'ny fanimbana, fanamasinana sy fanodinana atao zezika. Ny zezika biby dia iray amin'ny akora famokarana zezika biolojika.
Na tsy masirasira ny zezika akoho na maina, dia hitarika mora foana amin'ny fanimbana legioma, zaridaina ary voly vola hafa, izay miteraka fatiantoka lehibe amin'ny tantsaha. Andao atomboka amin'ny fijerena ny loza mety hitranga amin'ny zezika hen'akoho, ary maninona ny olona no mieritreritra fa mahomby kokoa ny zezika hen'omby noho ny zezika biby hafa? Ary ahoana ny fampiasana ny zezika akoho amin'ny fomba tsara sy mahomby?
Lozam-pifamoivoizana valo vokatry ny fampiasana zezika akoho amam-baravarana sy zaridaina:
1. Mandoro faka, mandoro zana-ketsa ary mamono zavamaniry
Aorian'ny fampiasana zezika akoho tsy misy masirasira, raha ampidirina amin'ny tany ny tananao, dia ho avo kokoa ny mari-pana amin'ny tany. Amin'ny tranga matotra, ny fahafatesan'ny flake na canopy feno dia hampihemotra ny fiompiana ary hiteraka fahaverezan'ny vidin'ny asa sy ny fampiasam-bola voa.
Manokana indrindra, ny fampiharana ny zezika amin'ny ririnina sy lohataona no ahiana atahorana indrindra, satria amin'izao fotoana izao dia avo ny mari-pana ao anaty trano fandraisam-bahiny, ary ny fanamasinana ny zezika akoho dia handefa hafanana be, mitarika amin'ny fandorana faka. . Ny zezika akoho dia nampiasaina tao amin'ny saham-boankazo tamin'ny ririnina sy lohataona, tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fatoriana fotsiny izy io. Raha vantany vao may ny faka, dia hisy fiantraikany amin'ny fanangonan-tsakafo sy ny voninkazo ary ny voankazo amin'ny taona ho avy.
2. Ny fanamasinana ny tany, mampihena ny famokarana voankazo
Ny fampiasana zezika akoho tsy an-kijanona dia namela sodium klôroida be dia be tao anaty tany, miaraka amin'ny sira 30-40 kilao isaky ny zezika akoho 6 metatra toradroa, ary sira 10 kilao isaky ny hektara no tena nanakana ny tsy fahazoana mivelona ny tany sy ny asany. . Zezika phosphate manamafy, zezika potash, calcium, magnesium, zinc, iron, boron, manganese ary singa manan-danja hafa, izay miteraka fitomboan'ny zavamaniry tsy mety, tsimoka voninkazo ary famokarana voankazo, tena mametra ny fanatsarana ny vokatra sy ny kalitaony.
Vokatr'izany, ny tahan'ny fampiasana zezika dia nihena isan-taona ary nitombo 50-100% ny vidin'ny fidirana
3. Asio asidra ny tany ary ampidiro ny aretina rhizosfera isan-karazany sy ny aretina viral
Satria ny pH ny zezika akoho dia manodidina ny 4, asidra be izy io ary hampody ny tany, vokatr'izany trauma simika sy fahasimbana lehibe amin'ny fotony sy ny fotony, manome viriosy maro entin'ny zezika akoho, aretina ateraky ny tany - mitondra bakteria, viriosy ary manome fotoana fidirana sy fidirana raha vao tonga ny aretina ny hamandoana sy ny hafanana.
Ny fampiasana zezika akoho tsy manara-penitra, mora mahatonga ny zavamaniry, malazo mavo, tsy maniry intsony ny atrophy, tsy misy voninkazo sy voankazo, ary na dia ny fahafatesana aza; Ny aretina virus, ny areti-mifindra, ny stalk rot, ny root root ary ny bakteria dia ny seza miharihary indrindra amin'ny fampiasana zezika akoho.
Ny zezika akoho dia toerana fitobiana sy toeram-piompiana nematodes faka-faka. Ny isan'ny atody nematode faka-fatotra dia 100 isaky ny 1000 grama. Ny atody ao amin'ny zezika akoho dia mora foy ary ampitomboina an'aliny alina.
Ny neematodes dia mora tohina amin'ireo mpitsabo simika, ary mihetsika haingana any amin'ny 50cm ka hatramin'ny 1,5 m izy ireo, ka manasarotra ny fanasitranana azy ireo. Ny nematode amin'ny root-knot dia iray amin'ireo loza mampidi-doza indrindra indrindra ho an'ireo trano heva antitra mihoatra ny 3 taona.
5. Mitondrà antibiotika, misy fiantraikany amin'ny fiarovana ny vokatra fambolena
Ny sakafon'ny akoho dia misy hormonina be dia be, ary manampy antibiotika koa hisorohana ny aretina, hoentina any anaty tany amin'ny alàlan'ny zezika akoho ireo, ary misy fiantraikany amin'ny fiarovana ny vokatra fambolena.
6. Mamokatra entona manimba, misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny voly, mamono zana-ketsa
Ny zezika akoho amin'ny dingan'ny famotehana mba hamokarana metana, entona amoniaka ary etona manimba hafa, hany ka ny tany sy ny voly dia miteraka fahasimbana asidra sy ny fahasimban'ny faka, ny tena matotra dia ny famokarana entona gazy etilena amin'ny fitomboan'ny faka, izay koa no tena antony lehibe fakany may.
7. Fampiasana ranon'akoho mitohy, miteraka tsy fisian'ny oksizena ao amin'ny rafitra faka
Ny fampiasana kotrana akoho mitohy dia miteraka tsy fisian'ny oksizena ao amin'ny rafitra faka sy tsy fitomboana. Rehefa ampidirina ao anaty tany ny zezika akoho dia mandany oksizenina ao anaty tany mandritra ny fizotran-javatra, ka mahatonga ny tany vetivety ao anaty hypoxia, izay hanakana ny fitomboan'ny voly.
8. metaly mavesatra mihoatra ny fenitra
Ny zezika akoho dia misy metaly mavesatra be toy ny varahina, merguriy, chromium, cadmium, firamainty ary arsenika, ary koa residues hormonina maro, izay miteraka metaly mavesatra be amin'ny vokatra fambolena, mandoto ny rano ambanin'ny tany sy ny tany, maharitra fotoana lava ho an'ny organika manova zavatra ho humus, ary miteraka fahaverezan'ny otrikaina lehibe.
Fa maninona no toa avo be ny fahavokisan'ny tany amin'ny alàlan'ny zezika akoho?
Izany dia satria ny tsinain'ny akoho dia mahitsy, moka ary moka miaraka, noho izany ny zavatra organika ao anaty zezika akoho, mihoatra ny 60% ny zavatra biolojika dia miendrika asidra urika, ny famotehana asidra urika dia manome singa azota betsaka, 500 kilao ny zezika akoho dia mitovy amin'ny urea 76,5 kg, ny toa azy dia toa matanjaka maniry ho azy ny voly. Raha mitranga amin'ny karazana palitao na voaloboka voankazo ity karazana toe-javatra ity dia mety hiteraka aretina ara-batana lehibe.
Izany dia indrindra noho ny fanoherana ny nitrogen sy ny soritry ny singa ary ny urea be loatra, izay hanjary ho voasakana ny fifohana ny singa afovoany sy ny soritra isan-karazany, ka miteraka ravina mavo, loboka, lozam-boankazo ary aretin-koditra akoho.
Efa nahita ny toe-javatra misy zana-kazo mirehitra na fakany lo ao amin'ny tanimbolinao na ny zaridaina legioma ve ianao?
Ny zezika dia apetraka betsaka, fa ny vokatra sy ny kalitao dia tsy azo hatsaraina. Misy tranga ratsy ve? toy ny fahafatesan'ny antsasaky ny halavany, ny fanamafisana ny tany, ny vodivary mavesatra sns ... Ny zezika akoho dia mila mandalo fermentation sy fitsaboana tsy manimba alohan'ny hametrahana azy amin'ny tany!
Fampiasana kotoran'akoho mahomby sy mahomby
Ny zezika akoho dia akora tsara amin'ny zezika biolojika, izay misy azota madio 1,6%, eo ho eo amin'ny 1,54% P2O5 ary ny potasioma 0,085%. Izy io dia azo zahana ho zezika biolojika amin'ny alàlan'ny fitaovana famokarana zezika voajanahary. Aorian'ny fizotran'ny fermentation dia hofoanana ireo bibikely sy voan-tsimparifary manimba amin'ny fiakarana sy ny fiakaran'ny maripana. Ny tsipika famokarana zezika akoho amin'ny ankapobeny dia miteraka fanamasinana → fanosehana → fampifangaroana ireo akora → famaohana → fanamainana → fampangatsiahana → fitiliana → fandrefesana sy famehezana → fitehirizana ireo vokatra vita.
Tabilaon'ny fikorianan'ny zezika biolojika
Tabilao mikoriana zezika biolojika miaraka amin'ny vokatra 30.000 taonina isan-taona
Fananganana ifotony ny tsipika famokarana zezika organika
1. Tamboho fermentation efatra no hatsangana ao amin'ny velaran-karena, isaky ny 40m ny halavany, 3m ny sakany ary 1.2m dee-p, miaraka amin'ny velarany 700 metatra toradroa;
2. Ny faritra misy ny akora dia manomana lalamby hazavana 320 m;
3. Ny velaran'ny famokarana dia mirefy 1400 metatra toradroa;
4. Mpiasa mpamokatra 3 no takiana amin'ny faritra akora, ary mpiasa 20 no ilaina amin'ny faritra famokarana;
5. Mila mividy kamio forklift telo taonina ny faritra misy ny akora.
Ny fitaovana lehibe amin'ny tsipika famokarana zezika akoho ：
1. Ambaratonga voalohany fitaovana fanamasinana ny akoho amam-borona: masinina mpanodina zezika, mpandady milina fanodinana compost, milina fanodinana compost mandehandeha, milina mpanodina zezika varahina
2. Fitaovana fanorotoroana: crusher material semi-wet, crusher rojo, mpamaky volo
3. Fitaovana fampifangaroana: mixer marindrano, mixeur disc
4. Anisan'izany ny fitaovana fitiliana milina fitiliana rotary ary milina fitiliana mihetsiketsika
5. Fitaovana Granulator: granulator manaitaitra, granulator kapila, granulator extrusion, granulator amponga rotary sy milina miendrika boribory
6. Fitaovana fanamainana: fanamainana amponga rotary
7. fitaovana milina mangatsiaka: milina fanamainana rotary
8. Fitaovana fampitaovana: mpamatsy fatra isa, mpanala rano zezika, masinina manarona, mpanangona vovoka, milina famonosana automatique automatique
9. Fitaovana fampitaovana: conveyor fehikibo, ascenseur siny.
Ny famolavolana dingana famokarana zezika voajanahary dia misy:
1. Teknolojia mahomby amin'ny fihenjanana sarotra sy ny fielezan'ny flora amin'ny bakteria.
2.Ny teknolojia fanomanana fitaovana avo lenta ary rafitra fanamasinana biolojika.
3. Ny haitao famolavolana zezika manokana tsara indrindra (ny fitambaran-tsarimihetsika tsara indrindra dia azo noforonina mora arakaraka ny toetran'ny tany sy ny vokatra eo an-toerana).
4. Teknolojia fanaraha-maso mety amin'ny fandotoana faharoa (entona maloto sy fofona).
5. Teknolojia famolavolana sy famokarana teknolojia an'ny tsipika famokarana zezika.
Raharaha mila fiheverana amin'ny famokarana zezika akoho
Fahatanterahana ny akora:
Ny fahamendrehan'ny akora dia tena zava-dehibe amin'ny dingan'ny famokarana zezika organika. Araka ny traikefa dia tokony ampifanarahina amin'ireto ny fahamendrehan'ny akora iray manontolo: teboka 100-60 amin'ny akora manodidina ny 30-40%, 60 isa ka hatramin'ny 1,00 mm ny savaivon'ny akora manodidina ny 35%, ary manodidina ny 25% -30% amin'ny savaivony 1.00-2.00 mm. Na izany aza, amin'ny dingan'ny famokarana, ny ampahany betsaka amin'ny fitaovana faran'izay avo dia mazàna miteraka olana toy ny sombin-javatra be loatra sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna noho ny viscosity tsara loatra.
Fenitra matotra amin'ny famokarana zezika akoho
Ny zezika akoho dia tsy maintsy simba tanteraka alohan'ny fampiharana. Ireo katsentsitra amin'ny zezika akoho sy ny atodiny, ary koa bakteria sasany mitondra areti-mifindra, dia hofoanana amin'ny alàlan'ny dingan'ny lo (fermentation). Aorian'ny fahalovana tanteraka, ny zezika akoho dia ho zezika fototra avo lenta.
1. Ny fahamatorana
Mandritra izany fotoana izany miaraka amin'ireto fepetra telo manaraka ireto dia azonao atao tsara ny mitsara ny zezika akoho namboarina.
1. Amin'ny ankapobeny tsy misy fofona ratsy; 2. hyphae fotsy; 3. Ny zezika akoho dia ao anaty toerana malalaka.
Ny fotoana fanamasinana dia matetika eo amin'ny 3 volana eo ambanin'ny toe-javatra voajanahary, izay hohomboina be raha ampiana fermenting agents. Miankina amin'ny maripana manodidina, 20-30 andro no takiana amin'ny ankapobeny, ary ny 7-10 andro dia mety ho vita amin'ny fepetra famokarana orinasa.
Ny atin'ny rano dia tokony ahitsy alohan'ny hanamasinana ny zezika. Amin'ny fizotran'ny zezika biolojika dia tena zava-dehibe ny fahamendrehan'ny rano ao anatiny. Satria ny bakteria lo dia feno bakteria velona, ​​raha maina loatra na mando loatra dia hisy fiatraikany amin'ny fivoaran'ny zavamiaina bitika, amin'ny ankapobeny dia tokony hotehirizina 60 ~ 65%.